Brindisi, obodo nwere ọtụtụ akụkọ ihe mere eme na mmiri nke Adriatic | Akụkọ Njem
Louis Martinez | | Italia
Brindisi dị n'akụkụ mmiri nke Oke osimiri Adriatic, n’ebe ndịda ọwụwa anyanwụ nke .tali. Bi kemgbe oge ochie ma merie ndị Rom na 267 BC, a maara ya dị ka "Ọnụ tozọ Ọwụwa Anyanwụ" n'ihi ọnọdụ ihe ùgwù ya iji malite njem ụgbọ mmiri ma Greece yanwa n'ókèala Eshia.
Ugbu a, ọ bụ a obodo bara uba ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ puku mmadụ iri itoolu na-enye gị ọmarịcha osimiri na ihu igwe dị mma. Ma ọtụtụ ihe ncheta dị mkpa na ọmarịcha gastronomy. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịmata Brindisi, anyị na-arịọ gị ka ị soro anyị.
1 Ihe ị ga-ahụ na Brindisi
1.1 Lọ nke Brindisi
1.2 The bastions
1.3 Ogige Duomo
1.4 Roman foduru
1.5 Ihe ncheta nke onye ọkwọ ụgbọ mmiri
1.6 Ihe ncheta ndị ọzọ nke Brindisi
1.7 Gburugburu Brindisi
2 Ihe ị ga-eri na Brindisi
3 Kedu mgbe ọ ka mma ịga njem na obodo Italy
4 Otu esi aga Brindisi
Ihe ị ga-ahụ na Brindisi
Dị ka anyị kwuru, obodo Italiantali dị na salentina larịị, n'ikperé mmiri Adriatic. Kemgbe oge Rom ọ bụ ọdụ ụgbọ mmiri dị mkpa na nke a emeela ka ọ gafere Gothic, Byzantine, Norman na ọbụna aka Aragonese. Anyị ga-egosi gị isi ihe ị ga - ahụ na Brindisi.
Lọ nke Brindisi
Obodo a nwere nnukwu ụlọ abụọ. Nke mbu bu Uhie, nke a na-akpọ maka agba nke nkume ya, ọ bụ ezie na a makwaara ya dị ka Aragonese, n'ihi na e wuru ya n'oge ọchịchị Spanish. Ọ bụ ebe nchebe siri ike wuru na obere Agwaetiti San Andres.
Nke abụọ abụrụ Lọ Suevo, nke ewuru na oge Frederick II (1194-1250), Eze Ukwu Rom Dị Nsọ na Eze Sicily. Will ga ahụ ya n’ọdụ ụgbọ mmiri, n’osimiri Poniente.
Ndabere nke obodo ahu nwekwara agwa nchebe: ha choro ichebe uzo di mkpa site na mwakpo ndi iro. Ugbu a, mmadụ abụọ fọdụrụ: nke Carlos V, nke e wuru n’oge Fernando de Aragón, na onye San Giacomo, na-etinye ma chebe nke ọma karịa nke gara aga.
Agbanyeghị, ikekwe ebe kachasị mma na Brindisi bụ ogige Duomo, nke, dị ka aha ya na-egosi, bụ Katidral (ọ bụ ihe ọ pụtara) katidral). Ọ bụ ụlọ nsọ e wuru na narị afọ nke XNUMX dị ka iwu ndị Romanesque si dị. Agbanyeghị, ala ọma jijiji mebiri ya, e wughachiri ya na narị afọ XNUMX. Ya mere, ụlọ ahụ ị nwere ike ịhụ ugbu a na-agwakọta baroque na neoclassicism.
I nwekwara ike ịhụ na Duomo square na Balsam Obí loggia, mbara ihu nke echekwara site na owuwu oge ochie nke narị afọ XNUMX; ụlọ nke Ọmụmụ ihe ọmụmụ, ụlọ nke narị afọ nke XNUMX nke nwere Diocesan Museum Giovanni Tarantini; ihe Museumgbè Nkà Mmụta Ihe Ochie na itinye Portico nke Knights Templar, nke nwere arcades abụọ nke Goth nkewapụrụ site na kọlụm Greek.
Obodo Italiantali dị ezigbo mkpa n’oge ndị Rom. Ya si Rome na site na Appia na site na Trajana. Ya mere, ọ gaghị eju gị anya na ọ nwere ọtụtụ ihe mgbe ochie ochie site n'oge ahụ.
N'etiti ha kọlụm romanakara nke obodo; ihe olulu mmiri nke ọwa ochie, na mpaghara ihe ochie nke Saint Pietro degli Schiavoni, nke dị n'okpuru dilọ ihe nkiri Verdi.
Ihe ncheta nke ndị na-akwọ ụgbọ mmiri
Ihe ncheta nke onye ọkwọ ụgbọ mmiri
Ihe ncheta mara mma nke ụgbọ mmiri ahụ nwere agwa dị iche, nke ewuru na iri atọ nke narị afọ gara aga na nke akụkụ ya bụ isi, n'ụdị ndọkpụ, na-ebili mita iri ise na atọ site na ala.
I nwekwara ike ịhụ na Brindisi na Ihe ncheta nke ndi daworo, site n'otu oge ahụ, na nke raara nye onye na-ede uri Latin Virgil, onye nọrọ afọ ikpeazụ ya ezumike nká n'obodo ahụ. Ha abụọ mara mma dịka eji eme ya marble Carrara.
Ihe ncheta ndị ọzọ nke Brindisi
Obodo mara mma nke Italiantali nwere ọtụtụ ihe ncheta anyị na-adụ gị ọdụ ka ị gaa. N'etiti ụlọ arụsị okpukpe, ị nwere ụka nke San Benedetto, na Saint John ma obu nke Santa Maria del Casale.
Banyere iwu obodo, ndị Ọnụ ụzọ ámá Mesagne, mbata ochie nke obodo, na Obí eze Granafei-Nervegna na Montenegro. Ma ọbụna karịa uru nwere Tancredi isi mmalite, nke malitere na narị afọ nke XNUMX, na nke Torres dere, nke XVII.
Na gburugburu nke Italian obodo i nwere ike ịhụ dị oké ọnụ ahịa osimiri ndị dị ka Torre del Orso na Dos Hermanas. Ma, karịa ihe niile, ọmarịcha ọdọ mmiri. Oku a na-apụ apụ n'etiti ndị a Grotto nke abu, e weere dị ka otu n'ime mmadụ iri kachasị mma n'ụwa.
Ọnụ ụzọ ámá Mesagne
You nwekwara ike ịchọta ogige ntụrụndụ mara mma ị nwere ike ịga ije. N'ime ndị a, na nke Salina nke Punta de Condesa, las Ọdịdị Bosco di Cerano nwere, na Aclọ Guaceto na Boscos nke Santa Teresa.
Ihe ị ga-eri na Brindisi
Mgbe ị gachara ileta obodo ahụ, ọ kachasị mma iji nri dị mma iji batrị batrị gị. Nchịkọta gị nwere ike ịmalite site na ole na ole petuli, nke bu udiri dumplings juputara na udiri di iche iche dika nkpuru osisi, akwukwo nri ma obu anwuru anwuru.
Mgbe ahụ ị nwere ike ịtụ otu risotto. Anyị na-adụ gị ọdụ tajedda, nke nwere osikapa, nri mmiri na poteto ma dozie ya na oven. Mana, ofe a na-ahukari, karisia Ude nke agwa, na grill inine nke mpaghara.
Dị ka usoro nke abụọ, anyị na-akwado azụ, nke dị ebube na mpaghara ahụ. Iji maa atụ, perch esiri n’ọkụ ghe oghe. Na, maka ihe eji megharịa ọnụ, ị nwere swiiti dị ka pasta na mandorle ma ọ bụ debanye aha. Ma kwa nnukwu chiiz na mkpụrụ osisi.
Banyere ihe ọ drinkụ drinkụ ahụ, ịnwere ike ịnwale ụfọdụ mmanya Apulian ndị mara mma, nke nwere aha mmalite. Ọ bụ ikpe nke Brindisi rosso o Rosato. Ndien ke akpatre, otu iko nke Limoncello.
O doro anya na ị nwekwara ezigbo achịcha na pizzas na obodo Italiantali. Mana anyị na-ahapụ anyị ka anyị nye gị ndụmọdụ na menu aga, nke bụ nke mbụ.
Kedu mgbe ọ ka mma ịga njem na obodo Italy
Brindisi nwere a ihu igwe. Winters dị nwayọ, na-adachakarị ala dara ala karịa ogo Celsius isii, ebe udu mmiri na-ekpo ọkụ, nke na-adịkarị elu ruo iri atọ. N'akụkụ nke ya, mmiri ozuzo na-edekarị n'oge mgbụsị akwụkwọ na udu mmiri.
Yabụ, oge kachasị mma iji gaa Brindisi bụ mmiri na udu mmiri. Karịsịa na nke mbụ, obodo ahụ na-anabata ndị njem ole na ole ma, na mgbakwunye, na-eme ememme ndị a na-ahụkarị dịka ndị na-achọ ịmata ihe Usoro Parato Horse.
Otu esi aga Brindisi
Ọ bụ ihe a na-ahụkarị iji ụgbọ mmiri gaa obodo Italiantali. Kwa afọ na-enweta ọtụtụ ụgbọ mmiri nke na-eme nkwụsị na ya. Agbanyeghị, ịnwekwara ike iji ụgbọelu mee ya. Na Ọdụ ụgbọ elu Salento Ọ bụ mba ụwa ma dịrị naanị kilomita isii site na mpaghara obodo mepere emepe.
Ọ bụkwa ebe nkwukọrịta dị mkpa ụgbọ okporo ígwè na-enweta ụgbọ oloko si Rome na obodo ndị ọzọ. Ma, ọ bụrụ na ịchọrọ ụgbọ ala ahụ, anyị ga-agwa gị na, iji ruo Brindisi, ị ga-agabiga na Okporo ụzọ Bari-Lecce ma sitekwa na SS 16 Adriatica.
Na mmechi, Brindisi Ọ na-enye gị ihe ncheta mara mma, oghere okike magburu onwe ya, ezigbo ihu igwe na gastronomy na-atọ ụtọ. Kedu ihe ị na-eche iji hazie njem gị gaa obodo Italiantali?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Getaways Europe » Italia » Brindisi